Goorma ayuu Ciise runtii ku dhashay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Intii lagu guda jiray imaatinka, tuugooyinka badankood waxay ku tusayaan xaflada dhalashada ciise: waxay tiriyaan maalmaha ilaa kirismaska. Maaha wax aan caadi ahayn in la dhagaysto wada-hadalada xilligan ee sannadka ku saabsan in 24-ka Disembar ay tahay maalintii saxda ahayd ee loo dabaaldega dhalashada Ciise Masiix iyo inay habboon tahay in maalintaas la dabbaaldego. Raadinta sanadka saxda ah, bisha, iyo maalinta dhalashada Ciise maahan wax cusub. Cilmiga cilmiga fiqiga ayaa tan la macaamilay ku dhawaad ​​labo kun oo sano halkaana waa qaar ka mid ah fikradahooda.
Clement ee Alexandria (ku dhawaad ​​150-220) ayaa magacaabay taariikho badan oo suurtagal ah, oo ay ka mid yihiin Noofembar 18, Janaayo 6, iyo Maalinta Kormaridda, kuwaas oo ku xirnaa sanadkaas markay ahayd Maarso 21, Abriil 24/25, ama May 20.
Sextus Iulias Africanus (ku dhawaad ​​160-240) oo loo magacaabay Maarso 25-keedii.
Hippolytus oo ka socota Rome (170-235), xer ka mid ah Irenaeus, wuxuu ku xusay laba maalmood oo kala duwan faallooyinkiisa ku saabsan kitaabka Daanyeel: “Muuqaalkii ugu horreeyay Rabbigeenna xagga jidhka wuxuu ka dhacay Beytlaxam sideed maalmood ka hor taariikhda janawalka Janawari. (Diseembar 25-keedii) maalintii afraad (Arbacada), oo lagu xusayay sharciga Augustus sanadkii 5500.
Sida laga soo xigtay taariikhyahan Yuhuudi ah Flavius ​​Josephus, meel ayaa ku taal dhalashadii Ciise intii u dhaxeysay March 12 iyo Abriil 11 ee sanadka 4aad, tan iyo markii Masiixu dhashay dhalashadii Herodos ka hor.
John Chrysostom (qiyaastii 347-407) ayaa loo magacaabay 25ka Diseembar taariikhda dhalashada.
28-ka Maarso ayaa lagu xusay xisaabinta Xaragada, shaqo aan qarsoodi ahayn oo laga yaabo inay asal ahaan ka soo jeedaan Waqooyiga Afrika.
Augustine (354-430) wuxuu qoray wargayska 'De Trinitate' in la rumeysan yahay in lagu qaabilay Maarso 25-keedii. Maalintii uu xanuunsaday oo ku dhashay Disember 25-keeda sida dhaqanku yahay ”.
Yuhuudda Masiixiyiinta ahi waxay magacaabaan dhowr maalmood oo dhalasho. Tixgalinta ugu badan wakiilku waxay kuxirantahay adeegyada wadaadnimada (inbadan si sax ah: "Amarka Abija" (Luukos 1,5). Qaabkan wuxuu u horseedaa inay ku dhashaan dhalashadii Ciisena munaasabadda Sukkot / Tabernacle. Gudniintiisu waxay dhacday maalintii siddeedaad ee ciidaha.
Waxa xiiso leh in la maleeyo in Ciise ku dhashay xilligii Iidda Kormaridda ama Iiddii Waababka (ama heshay). Waxaan jecelahay fikradda ah inuu ciise sameeyay shaqada malaa'igta dhimashada markay dhacday xilligii Kormaridda. Markuu yimaaddo ama uu dhalan lahaa inta lagu gudajiro Iiddii Waababka. Si kastaba ha noqotee, ma jirto caddayn ku filan oo ah in la hubo maalinta uu Ciise u yimid dhulka, laakiin laga yaabee in qofku ku samayn karo qiyaaso wanaagsan marka loo eego caddeymaha kooban ee aan heli karno.
Luukos 2,1: 5 waxaan ka aqrin karnaa in boqorka boqorka Agoosto August uu go'aan ka gaadhay canshuuraha Boqortooyada Roomaanka sidaas darteedna ay tahay in qof walbaa ku noqdo magaaladiisa si uu u bixiyo cashuurta. Yuusuf iyo Maria sidoo kale waxay ku noqdeen Beytlaxam, oo ahayd meeshii uu ku dhashay Ciise. Waxaa la rumeysan yahay in tirakoobka noocan oo kale ah uusan dhicin waqti kasta oo taariikhda. Ka dib oo dhan, waa inaysan u dhigmin waqtiga goosashada. Waxaa sidoo kale loo qaadan karaa in tirada noocaas ah aan loo qorin xilliga jiilaalka haddii hawadu ay adkeysay safarka. Dhulka waxaa la beeray guga. Dayrta, xilliga goosashada ka dib, waxaa laga yaabaa inay ahayd waqti tirakoobka noocan oo kale ah, sidaa darteedna xilligii dhalashada Ciise. Si kastaba ha noqotee, kama cadda qoraallada kitaabiga ah inta ay Maria iyo Yuusuf sii joogeen Beytlaxam. Ciise wuxuu kaloo dhalan karaa asbuucyo kadib tirinta kadib. Ugudambeyn, ma go'aamin karno taariikhda dhalashada Ciise si hubaal ah. Kuwa wax qoslaya waxay ku dhegaan xasillooni darradan waxayna ku andacoonayaan in wax walba ay yihiin quraafaad iyo in Ciise uusan waligiis jiri jirin. Laakiin xitaa haddii taariikhda dhalashada Ciise aan si cad loo sheegi karin, dhalashadiisa waxay ku saleysan tahay dhacdooyin taariikh ahaan la xaqiijin karo.
Saynisyahan kitaabiga ah FF Bruce wuxuu leeyahay waxyaabaha soo socda ee ku saabsan kuwa shakiga leh:
Qorayaasha qaar waxay kafekeraan khuraafaadka Masiixa, laakiin uma ahan sabab daliil taariikhi ah. Taariikhda Masiixu waa mid asal ahaan jirta, taasi waa, ma aha wax cadho leh ama uma baahnid caddeyn, sida taariikh ahaanta Julius Caesar. Taariikhyahanadu maahan sheekada Masiixa faafinaysa " (Dukumintiga Axdiga Cusub, bogga 123).
Dadka wakhtigii Ciise waxay yaqiinsadeen waxsii sheegyada markay filayaan Masiixa. Laakiin waxsii sheegyada ama Injiillada midkoodna uma cayimin taariikhda saxda ah ee imaatinka Masiixa, xitaa haddii taariikhyahanadu casri doonayaan. Hadafku maahan Kitaabka Quduuska ah inuu noo sheego waqtiga saxda ah, maxaa yeelay wuxuu “ku bari karaa inaad garaacdo iimaanka Ciise Masiix” (2 Timoteyos 3,15).
Ahmiyada ugu weyn ee qorayaasha Axdiga Cusub maahan maalintii dhalashadii Ciise, laakiin waa in Ilaaha Aabbaha u soo diray wiilkiisa dunida waqti ku habboon taariikhda si uu u ilaaliyo ballanqaadyadiisa una badbaadiyo badbaadada.
Rasuul Bawlos wuxuu yidhi:
"Laakiin markii wakhtigii buuxsamay, Ilaah wuxuu soo diray wiilkiisii, oo naag ka dhashay oo sharciga ka hooseeyey, si uu u soo furto kuwii sharciga ku hoos jiray si aannu carruurtayda u lahaan karno." (Galatiya 4,4: 5). Injiilka Markos waxaan ka akhrinaa: “Markii Yooxanaa la xirey ka dib, Ciise wuxuu yimid Galili wuxuuna dadka ku wacdiyey injiilka Ilaah wuxuuna yidhi: Wakhtigii waa buuxsamay, oo boqortooyadii Ilaah waa timid. Toobad keena oo injiilka rumaysta! (Mark 1,14-15).
Ogaanshaha taariikhda saxda ah ee dhalashada Masiixu waa mid taariikhi ah mid xiise leh, laakiin fiqi ahaan gebi ahaanba ma khusayso. Waxaan kaliya u baahan nahay inaan ogaano inay taasi dhacday iyo sababta uu u dhashay. Baybalku si cad ayuu uga jawaaba su'aalahan. Aynu ilaalino muuqaalkan xilligii Advent oo aan diirada saarin faahfaahin yar.